Du’a Biyyansaa Dhibbaa Gaaddisaa ilaalchisee, Abbaan Isaa fi Poolisiin Yaada Wal-faallessu Kennan
Obbo Dhibbaa Gaaddisaa, du’a ilma isaanii Biyyansaa Dhibbaa Gaaddisaaf sababaan, Shawaa Lixaa, aanaa Midaa-Qanyii keessatti, miseensonni milishaa aanichaa mana inni keessa jiraatu keessaa gad baasanii haleellaa irratti raaw’ataniin miidhamuu isaa ti, jechuun Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennan. Koomishinarri Itti-aanaan Koomishina Poolisii Oromiyaa, Komaander Demmellaash Gabre-Mikaa’el immoo, televiiziyoona mootummaan ibsa kennaniin Biyyansaan Kaanserii Mar’umaan guddaa fi Michii Sombaan du’uu isaa ragaa hospitaalaa argannee jirra, jedhu.
Biyyansaan miseensa Kongiresa Uummata Oromoo jabaa fi duula “na filadhaa” paartichi geggeessu keessatti ka qooda guddaa fudhataa ture tahuu dubbatu, hoogganoonni paartichaa.
Obbo Dhibbaa Gaaddisaa waa’ee du’a ilma isaanii ilaalchisee, Televiiziyoonni Mootummaa gabaasaa tamsaase irratti haasaa isaanii kukkutee adda babaasee, jechoota ofii itti guutuudhaan akka isaan Biyyansaan miseensa DHDUO tahuu dubbatan fakkessuu yaaluu isaa illee himatanii jiru.
Ilma wasiila Biyyansaa ka tahe, Dargaggoo Dargii Mararaas ibsa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf kenneen, Biyyansaan reebichaan miidhaan irra gahuu isaa fi dhukkuba ka biraa irraa walaba tahuu isaa ka mirkaneessu X-RAY fi ragaa barreeffamaa Hospitaala Xiqur-Ambassaa irraa argannee harkaa qabna, jedha. Yeroo Biyyansaan reebame irraa kaasee hanga inni du’aan irraa adda bahetti sababaa inni isa wal’aansisaa turee fi ragaalee mara beekuuf jecha, humnoonni Mootummaa aanaa sanaa akka isa qabuu yaalan dubbata, dargaggoo Dargiin. “Yeroo ani harkaa ba’uuf fiigu, rasaasa lama natti dhukaasanii Waaqayyo tu irraa na oolche” jedha.
Gama biraatiin, Komaander Demmellaash ibsa televiiziyoona Mootummaan kennan sanaan, hoogganoota Medrek keessaa tokko ka tahe, hoogganaan Warraaqsa Federaalistii Dimookiraatawa Oromoo, Obbo Bulchaa Dammaqsaa, waa’ee du’a Biyyansaa Dhibbaa Gaaddisaa odeeffannoo sobaa madda-oduu Royitersii fi madden oduu biyya keessaaf kennan, maqaa paartii biyya bulchaa jiruu xureessan , jechuun balaaleffatan. Obbo Bulchaan garuu, nuti akeeka maqaa xureessuu hin qabnu. Wannan maddeen oduutti dubbadhe maraaf ragaa qabatamaa tu jira, jechuun deebii kennan.
Gabaasaa isaa guutuu sagaleen tamsaasame dhaggeeffadhaa.